JD.com နှင့် CMG Spring Festival Gala - Pandaily
JD.com နှင့် CMG Spring Festival Gala
Jan 05, 2022, 21:41ညနေ 2022/01/07 23:37:28 Pandaily
ဒီကေနႛ မႀာ China Media Group (CMG) က တရားဝင္JD.com သည် ၂၀ ၂၂ နွေ ဦး ပွဲတော် Gala အတွက် သီးသန့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြု သည့် မိတ်ဖက် ဖြစ်သည်. JD.com သည္ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ယြမ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ (ေဒၚလာ ၂ ၃၆ သန္း) တန္ဖိုးရွိ စာအိတ် အနီ မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ ယခုႏွစ္ Interactive Program ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အသုံးပြု သူတွေအနေနဲ့ Spring Festival Gala Interactive Event ကို JD App ကနေ တစ်ဆင့် ကြိုတင် မှာယူ နိုင်ပြီး အွန်လိုင်း ရတနာ သေတ္တာ ဖွင့် ဖို့ သူငယ်ချင်း တွေကို ဖိတ်ခေါ် နိုင်ပါတယ်။ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ မတိုင္မီ တစ္ရက္ အလို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အသံုးျပဳ သူမ်ားသည္ အပလီ ေကး ရွင္း တြင္ အတူ ေပ်ာ္ ႐ႊ င္ ႏိုင္ၿပီး မိတ္ေဆြ မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အျပန္အလွန္ ကံေကာင္း ျခင္း စာအိတ် အနီ
၂၀ ၂၂ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် Gala တွင် CMG နှင့် JD.com တို့၏ သီးသန့် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် JD.com ၏ အသုံးပြု သူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေး နိုင်စွမ်း နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော လူမှုရေး ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် များတည်ဆောက် နိုင်စွမ်း ကို မီးမောင်းထိုး ပြသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် JD.com Retail ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Xin Lijun က JD.com သည် CMG နှင့်ပူးပေါင်း ရန် ဤ အခွင့်အလမ်း ကို တန်ဖိုးထား ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို႔အျပင္ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ သည္ JD.com သည္ ေႏြ ဦး ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ၁၀ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ပွဲတော် ကာလအတွင်း စားသုံး သူများ ထံသို့ အထုပ် များကို အချိန်မီ ပေးပို့ မည်ဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များ ကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:JD.com သည် Vivo နှင့်၎င်း၏ အမှတ်တံဆိပ် ခွဲ iQOO နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် ရရှိ ခဲ့သည်
Spring Festival Gala သည် ပွဲတော် အတွင်း အလွန် အာရုံစိုက် သော တီဗွီ အစီအစဉ် တစ်ခုအနေဖြင့် အသွားအလာ များစွာ ကိုမောင်းနှင် နိုင်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Bytedance ၏ တုန်လှုပ် နေသော အသံ သည် ပါတီ အနီရောင် စာအိတ် ပေးပို့ ခြင်း အခွင့်အရေး ကိုရရှိခဲ့သည်။ တရားဝင် ကိန်းဂဏန်းများအရ Spring Festival Gala အနီရောင် စာအိတ် သည် အကြိမ် ပေါင်း ၇၀. ၃ ဘီလီယံ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္အထိ Chuntyin တြင္ တင္ထား ေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ဗီဒီယို သည္ ၾကည့္ရႈ သူ ၅၀ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး Like ၆ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။